About Us - Ningbo Dahongying bayoenjineering Co., Ltd.
D-Alpha Tocopheryl copolymer
Vitamin E Dabiiciga qallalan Powder
DABIICIGA VE XIRFADLAYAAL
Ningbo Dahongying bayoenjineering Co., Ltd.
Ningbo Dahongying bayoenjineering Co., Ltd. (Est.1998) waxa uu ku yaalaa Ningbo - xarunta dhaqaale ee koonfurta of Yangtze River Delta. Lagu xiray in Port Ningbo bari, iyo faa'iido juquraafi weyn sida jeeda Shanghai ee waqooyiga. Company waa ganacsi oo cagaaran iyo deegaanka-friendly in industry bayoteknoolajiyadda, oo waxaa la guddoonsiiyey dhowr horyaal sannadihii la soo dhaafay, waxa la Waxa kale oo ay leedahay dhowr abaalmarinta in beerihii is-abuurnimo, keydinta tamarta, ilaalinta deegaanka iyo hay'ad samafal dadweynaha.
Company waa soo saaraha ugu horeysa ee Dabiiciga ah VE ee Shiinaha, ayaa ku takhasustay soo saarka ee Dabiiciga ah VE muddo tobannaan sano ah sano. Waxa uu diiradda ay fiiro gaar ah oo ku saabsan bixinta cunto caafimaad leh taasoo keentay farsamo iyo tayo fiican macaamiisha oo adduunka ah. Tan iyo dhisidii, Shirkadda ulo xoojinta maamulka iyo hal-abuurka farsamo. Iyada oo ku saleysan fikrad maareynta Human Salaysan ah, Company ayaa aasaasay nidaam damaanad tayada dhawaaq si loo damaanad qaado wax soo saarka oo tayo sare leh.
In kastoo Company ayaa ogaaday taariikhda ammaan badan, waxaa weli waddo dheer si ay mustaqbalka u tagaan. Kaliya by technology sare iyo waayo-aragnimo maamul hodan, wada jir ah ula feature ruuxiga ah ee "Green, Healthy iyo Happy", aan ku gaari kartaa goolka shirkadu qarnigii-jir ah iyo brand dunida-caan. Waxaan aaminsan nahay in, xagga kar, Dahongying noqon doonaa ciyaaryahankii bararkii Dabiiciga VE.
Haddii aad xiisaynayso in alaabta ama wax su'aalo ah qabto, fadlan si xor ah u nala soo xiriir. Waxaan rajaynaynaa in ay xiriir iskaashi kula mustaqbalka dhow.
NO.166 BEIHAI WADDADA XIEPU ZHENHAI AREA-315204, Ningbo CITY, Zhejiang Gobolka, Shiinaha